Arsenaal injifate. Cheelsiifi Manchastar lamaan morkattoota isaanii woliin qabxii qooddatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Arsenaal injifate. Cheelsiifi Manchastar lamaan morkattoota isaanii woliin qabxii qooddatan
Cheelsiin qabxii 3 Priimer Liigii ittiin hoogganaaru tikfachuu danda’e. Kuni erga Cheelsiin Saawuzhamton woliin 1 – 1 gargar bayeeti. Manchastar Siitiin dirree isaa irratti Burnliiy woliin wolqixa bahuun Cheelsiin akka qabxii 3 hooggansa Priimer Liigii itti fufuuf hiree uume. Saadi’oo Man Saawuzhamtaniif goolii yoo laakkofsiisu, isii Cheelsii Haazaard ture kan kiyyoo keessa marmarse. Gareen lamaanuu marsaa 2ffaa keessa goolii galchuu hindandeenne.
Manchaster Siitiin garee Burnliiy kan sadrakaa 19ffaa irra jiru woliin 2 -2 gargar bahuun isaa hiree Cheelsitti dhiphisuu bubbetti kenneera. Taphoota torbee kana geggeeffamaniin gareen gurguddoon afranuu morkattoota isaanii woliin wolqixa bahan.
Manchastar Yunaayitidis hiree Cheelsitti daran kalaayuu facaase. Erga Tootnihaam woliin 0 – 0 gargar bahee Manchastar qabxii 10 Cheelsii, qabxii 7 Manchastar Siitii hordofutti jira.
Arsenaal 2 – 1 West Ham injifachuudhaan gareen West ham sadarkaa 5ffaa irraa akka dhabamu taasiseera. Injifannoon kuni Arsenaal sadarkaa 5ffaa irra akka taa’u isa dandeessiseera. Arsen Venger tapah booda yaada gareen isaa tapha itti aanuus bifuma kanaan irra aanuu akka qabu kennateera.
Priimer Liigii irratti gareen Leester gare Huul 1 – 0 injifachuun abdii Priimer Liigii keessaa tufamuu jalaa ufdandamachiisuu uumateera. Leester ammatti dhuma gabatee Priimer Liigii irra jira. Erga Fulbaanaa kaasee Leesteriif injifannoon kuni isa jalqabaati.
Previous articleLammiin Britaaniyaa tokko Baahirdaar keessatti ajjeefamuun gabaafame
Next articleBaqattoonni 24 hedduun isaanii lammiiwwan Itoophiyaa ta’an Galaana Diimaa irratti dhuman